IBigCommerce iphehlelela iqonga leShishini ngezoQoqosho | Martech Zone
NgoLwesithathu, Septemba 2, 2015 NgoLwesibini, Meyi 2, 2017 Douglas Karr
IBigCommerce isungule Ishishini leBigCommerce, iqonga le-e-commerce elomeleleyo elinikezela abathengisi abaphezulu abathengisa izigidi zeedola kwintengiso. Amashishini eBigCommerce abonisa ukhuseleko kunye nokukhuselwa, ixesha langempela kubahlalutyi kunye nokuqonda kunye nokudityaniswa kwamanqanaba okushishina enza ukuba abathengisi be-Intanethi balawule kwaye balinganise ishishini labo ngaphandle kobunzima bezinto ezizezabo, izisombululo zangaphambili okanye izixhobo ze-IT ezibizayo. Inkampani ikhuphe iqonga lokukhetha abathengi kunyaka ophelileyo kwaye ngoku ibhengeza ukufumaneka ngokubanzi.
Iimpawu ezinkulu ezisebenzisa iBigCommerce Enterprise zibandakanya iSamsung, iGibson, iMarvel, iCetaphil, iSchwinn, iPergo, i-Enfamil kunye ne-Ubisoft. Abathengi abasandula ukutyikitywa kubandakanya iAustin Bazaar Music, Brinks, Bottle Breacher, Apothecary Bulk, Dallas Golf, Duck Commander, Flash Tattoos, Lime Crime, Legends, NRG kunye neOverstock drug.
Ukusukela oko safudukela kwiBigCommerce, indawo yethu ngoku iyakhawuleza, amava omsebenzisi angcono, kwaye siphumelele kwinqanaba eliphezulu lokukhangela. Sinyuse intengiso yethu kwi-intanethi ngama-47% kwaye ngoku sibonisa njengesiphumo sokuqala kuluhlu lwezinto eziphilayo kuGoogle. UPaul Yoo, uMongameli kunye ne-COO e-US Patriot
Njengengxenye yokukhutshwa, abathengi be-BigCommerce Enterprise banokufikelela kubuchule obutsha kunye nokuphuculwa okuyilelwe ukuxhasa ukusebenza, ukuguquguquka kunye nokuthembeka kweemfuno zamashishini avelayo.
Ixesha langempela, uhlalutyo lomgangatho wabathengi -I-e-yorhwebo esandula ukwandiswa kubahlalutyi ideshibhodi eyenza ukuba abathengi babuyisele ingeniso elahlekileyo ngokuvavanya isimilo sokuthenga kwabathengi, ukwandisa uluhlu lwezinto kunye nokuthengisa kunye nokuvavanya ukusebenza kwephulo lokuthengisa kunye nokubuyela kutyalo-mali kumthengi ngamnye ngexesha langempela.
IBinCommerce Insights Optimization Injini -Isiqulatho esipheleleyo sedatha enokwenzeka kunye nokuqonda, okufumaneka okokuqala ngqa kwiqonga le-e-commerce, kunye nobuchule bokunika ingxelo olunzulu ukunceda abathengisi babuyise abathengi kunye neenkqubo zokunyaniseka kwepetroli ngokuchonga ixabiso eliphezulu kunye nomngcipheko. abathengi, ukuqhuba ukuqhuba ukuphinda uthenge ngohlahlelo lokuthenga, uchonge iimveliso ezingenzi kakuhle usebenzisa inqanaba lencoko oluzenzekelayo kunye nohlalutyo lwezithuthi, kunye nokuqhuba ingeniso eyonyukayo ngokusebenzisa iingcebiso zokuthengisa
Ukuhlanganiswa kwamashishini-iBanga -Abarhwebi banokwandisa amandla ezivenkile zabo ngokusebenzisa amakhulu okudityaniswa kwamanqanaba eshishini. Abathengi bamashishini bafumana ukufikelela okungathintelwanga kwiseti epheleleyo yokudityaniswa kubandakanya zonke iimpawu kunye nokusebenza-ukusuka kucwangciso lwezixhobo zeshishini kunye nolawulo lwe-inventri kubalo kunye nentengiso ye-imeyile- efunekayo ukuqhuba ivenkile ekwi-intanethi yezigidi ngezigidi.
Advanced Security kunye noKhuseleko -Abarhwebi beshishini bafumana ukufikelela kumanqaku okhuseleko anamandla anje nge-SSL eyakhelweyo, ukuthotyelwa kwe-PCI, kunye nokukhuselwa kwe-DDOS ukuqinisekisa ukuba iisayithi zihlala zisebenza, kwaye abathengi banokuthi benze ngokuzithemba. IBigCommerce ikwabonisa ii-HTTPS zesiza ngokubanzi ukonyusa i-Google-Search rankings ukongeza ekwandiseni ukuzithemba kwabathengi.
Ukusebenza kulungiselelwe iiVenkile -Iziseko zophuhliso zeBigCommerce zidibanisa uthungelwano lwehlabathi lwamaziko edatha ukuqinisekisa ixesha elifanelekileyo lokulayisha kunye nokuphendula kwabakhenkethi besiza kunye nabathengi kuzo zonke iijografi. Abaxumi bamashishini baxhamla kwindawo yokujonga esweni i-24/7 kunye nenkxaso ephambili ngokufumaneka kwe-SLA ye-99.9% yexesha lokugcina.
tags: Umculo waseAustin BazaarBigCommerceishishini elikhulu lezorhweboIbhotile eBreacherIibhinkiApothecary yobuninziICetaphilDallas GolfUmlawuli weDadaEnfamilishishini ecommerceIimpawu zeFlashGibsonImithethoUlwaphulo-mthetho lweLimeMarvelNRGIvenkile ethengisa iziyobisi ngokugqithileyoPergoSamsungSchwinnUbisoft